Narovan’ny Anjely i Hezekia Mpanjaka | Tantara ao Amin’ny Baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cinghalais Dangme Danoà Dayak Ngaju Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galicienne Garifuna Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Miskito Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Pendjabi Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Romanianina Rosianina Rutoro Rômania (Macédoine) Sirilika Samoanina Sangir Sango Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tandroy Tankarana Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tshwa Tsonga Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Resin’ny Asyrianina ny fanjakan’ny foko folon’ny Israely. I Sankeriba no mpanjakan’i Asyria, ary tiany halaina koa ny fanjakan’ny foko roan’i Joda. Resiny daholo ny tanànan’i Joda, saingy i Jerosalema no tena tiany halaina. Tsy fantany anefa fa i Jehovah no niaro an’i Jerosalema.
I Hezekia no mpanjakan’ny Joda tamin’izay. Nomeny vola be i Sankeriba mba tsy hanafika an’i Jerosalema. Noraisin’i Sankeriba ilay vola, nefa mbola nalefany hanafika an’i Jerosalema ihany ny miaramilany. Natahotra be àry ny olona tao fa nihananatona ny Asyrianina. Hoy anefa i Hezekia: ‘Aza matahotra fa hataon’i Jehovah matanjaka kokoa noho ny Asyrianina isika.’
Nirahin’i Sankeriba hanambanimbany ny olona tao Jerosalema i Rabsake. Teo ivelan’ny tanàna izy no niantsoantso hoe: ‘Aza manaiky hofitahin’i Hezekia ianareo fa tsy afaka manampy anareo izany i Jehovah. Tsisy andriamanitra afaka miaro anareo aminay mihitsy!’
Nanontany an’i Jehovah i Hezekia hoe inona no tokony hataony. Dia hoy i Jehovah: ‘Aza matahotra amin’ny tenin’i Rabsake, fa tsy ho resin’i Sankeriba izany i Jerosalema.’ Nandefasan’i Sankeriba taratasy i Hezekia avy eo, hoe: ‘Tsy aleonao ve manaiky ho resy e? Tsy hamonjy anao izany i Jehovah!’ Nivavaka àry i Hezekia hoe: ‘Mba vonjeo izahay, Jehovah ô, amin’izay fantatry ny rehetra hoe ianao irery no tena Andriamanitra.’ Dia hoy i Jehovah: ‘Tsy ho tafiditra ao Jerosalema ny mpanjakan’i Asyria, fa izaho mihitsy no hiaro an’ilay tanàna.’
Natoky be i Sankeriba hoe kely sisa dia ho resiny i Jerosalema. Nandefa anjely anankiray anefa i Jehovah, ny alin’iny, dia novonoin’ ilay anjely daholo ny miaramila asyrianina 185 000! Tsy nanana miaramila natanjaka be intsony i Sankeriba Mpanjaka, ka voatery nody fa resy. Tena niaro an’i Hezekia sy ilay tanàna tokoa i Jehovah e? Ho natoky an’i Jehovah hoatr’izany koa ve ianao, raha tao Jerosalema ianao?
“Ny anjelin’i Jehovah dia mitoby manodidina an’izay matahotra Azy, ka mamonjy azy.”—Salamo 34:7
Fanontaniana: Ahoana no niarovan’i Jehovah an’i Jerosalema? Mino ve ianao hoe hiaro anao koa i Jehovah?
Karatra Ara-baiboly: Hezekia
Nampitomboin’i Jehovah firy taona ny andro niainan’i Hezekia? Adikao ity karatra ara-baiboly ity, dia fantaro ny valiny.
Nositranin’i Jehovah i Hezekia
Tianao ve ny hanatsara ny vavaka ataonao? Vakio ilay tantara.
“Jehovah ô! ... Ianao no Itokisako”
Inona no azonao ianarana avy amin’i Hezekia, ka hanampy anao hatoky tanteraka an’i Jehovah Andriamanitra?